Matongerwo eNyika, 16 Zvita 2017
Mugovera 16 Zvita 2017
Kupindira kweMauto Munyaya dzeMatongerwo eNyika Kwoshorwa
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kongiresi yakaitwa ne Zanu-PF haina zvizhinji zvekuyemura sezvo mubato iri machine makakatanwa.
Kudomwa kweMunyori weMadzimai muZanu PF Kwosimudza Mibvunzo
Asi munyori anowona nezvemitemo muZanu PF, VaPaul Mangwana, vanoti VaMnangagwa vakatevedzera bumbiro ravo rebato mukudoma kwavakaita Amai Chinomona kuti vave munyori wezvemadzimai.
Zanu-PF Inonzi Iri Kutyora Mitemo Yayo
Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoti kongiresi yechimbi chimbi yakaitwa ne Zanu-PF inoratidza kuti bato iri rafunga zvokumboisa mbumbiro remitemo yaro parutivi.
VaMnangagwa Vanotambirwa seMutungamiri Mutsva weZanu PF
Mutungamiri wenyika, Va Emmerson Mnangagwa, vatambirwa semutungamiri weZanu PF vakapinda munhoroondo yekuva munhu wekutanga kutora masimba ebato zvichitevera kusiyiswa basa kwakaitwa VaRobert Mugabe mwedzi wapera.
VaSibusiso Moyo Vanoti Vanoda Kugadzirisa Hukama hweZimbabwe neDzimwe Nyika
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru ndere kugadzirisa hukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi rose.
ZEC Yokurudzirwa Kuwedzera Nguva yeKunyoresa Kuvhota
Masangano akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vari kukurudzira boka reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, kuti iwedzere nguva yekunyoresa kwevanhu kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzegore rinouya.
VaMnangagwa Vanoshoropodza Chikwata cheG40 Vachiti Chaikanganisa Bato
Kongiresi yeZanu PF Inotanga muHarare
Zvisungo zvitatu zvinoti kutambirwa kwaVaEmmerson Mnangagwa semutungamiri webato, kupa VaMnangagwa masimba ekumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya uye kutambira zvisungo zveCentral Committee zvakaitwa musi wa19 Mbudzi ndizvo zvinonzi zvichazeyiwa.
Mauto Otyirwa Kuti Ndiwo Ane Masimba Mukufambiswa kweNyika
Zanu-PF iri kuita kongiresi yayo yechimbi-chimbi mangwana, Chishanu, mu Harare, iine zvisungo zvitatu zvichakurukurwa.
MDC-T Inoramba Kuti Nhengo Dzayo Dzakakumbira Zvirango kuAmerica
Rimwe remapato ari kushoropodza danho rakatorwa nemubatanidzwa weMDC Alliance rekuenda kuAmerica kunomira pamberi pedare rekongiresi, ibato reNCA rinotungamirirwa naProfessor Lovemore Madhuku.
Madzimai muZanu PF Osimudza Nyaya yeMutevedzeri weMutungamiri weBato weChidzimai
Nhengo dzemadzimai dzebato reZanu PF dzinoti dzinofara zvikuru kana mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, vakadoma mudzimai kuti ave mumwe wevatevedzeri wavo mubato panopera musangano wekongiresi yechimbi chimbi mangwana.